Social Sector – Myanmar Independent Living Initiative (MILI)
စက်တင်ဘာလတွင် ကျရောက်သော မီလီဝန်ထမ်းများ၏ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
စက်တင်ဘာလတွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူမျ� ...
Conduct Personal Development and Self-exploration Training for MILI Staff
With the objective of to empower and to strengthen the capacity of MILI staff, Executive Director, U Nay Lin Soe conducted personal development and se ...
ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လတွင် ကျရောက်သော မီလီဝန်ထမ်းများ၏ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လတွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံမသ ...
ဇွန်လတွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများေ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့သည် MAM Project � ...
Conduct Campaign for Accessible Public places
အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောနေရာများတွင် မသန်စွမ်းသူမ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (၈) နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အလှူငွေနှင့် ပစ္စည်းများလှူဒါန်း
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ သည် အဖွဲ� ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (မီလီ)၏ ၈ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကြေးရတု အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (မီလီ)၏ ၈ � ...
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျရောက်သော မီလီဝန်ထမ်းများ၏ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူ� ...
Myanmar Independent Living Initiative (MILI) family went onathree-day staff annual retreat to Mesot, Thailand from 18th to 20th December 2018. It is ...
Finland နိုင်ငံမှ မသန်စွမ်း ဂီတနှင့် အကပညာရှင်အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများ အတွေ့အကြုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
Finland သံရုံး၊ ABILIS Foundation နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ� ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့ အခမ်းအနား၌ မသန်စွမ်းသူများအတွက် နည်းပညာ အထောက် အကူပြု ပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းပြသ
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည် ...
မေလနှင့် ဇွန်လတို့တွင် ကျရောက်သော မီလီဝန်ထမ်းများ၏ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
မေလနှင့် ဇွန်လတို့တွင် ကျရောက်သော မြန်မာနိုင်ငံမသန်စ ...
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (မီလီ)၏ ၇ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ သက္ကလပ်ရတု အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (မီလီ)၏ ၇ � ...